AMBODIMITA Mbola tsy voasambotra ilay voay
Araka ny fanadihadian’ny polisim-pirenena eny Ambohimanarina, voalazan’ireo mponina eny an-toerana fa nahita voay tokoa izy ireo teny Ambodimita.
Tamin’ny resaka manokana nifanaovana tamin’ny mpamonjy voina anefa no nampahalalany ny mpanara-baovao fa efa tonga teny an-toerana izy ireo afak’omaly hisambotra ilay voay fa tsy tazana. Voalazan’ny mpiandraikitra eo Tsaralalana hatrany fa nihamaro ny olona izay nitangorona sady nitabataba ka heverina izay no nampisitrika ilay biby mpandrapak’olona tamin’ny fotaoana nahatongavan’ireo mpamonjy voina. Ireo mponina teny an-toerana izay sendra ny mpanao gazetinay dia nilaza fa voay salasany no tazan’izy ireo. Tazan-davitra ihany koa moa noho ny tahotra ary tsy nipoitra tanteraka io ilay voay. Manentana ny mponina eny an-toerana sy ny manodidina hatrany ny manampahefana eny ifotony mba ho malina amin’ity biby mampidi-doza anaty rano ity. Miandry antso hatrany koa ny mpamonjy voina raha sendra mipoitra indray io voay io ary entanin’ny tompon’andraikitra hatrany mba tsy hitabatabana sy hitangoronana amin’ny fotoana fahitana azy indray mba hahafahana misoroka ny loza amin’ny fisamborana azy. Milaza moa ireo mponina fa maro ireo mbola mirobo-drano amin’ny fitsijana ny ambim-bariny eny an-tsaha.